ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ) - DVB
ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)
ဒီတပတ် ဒီဗွီဘီရဲ့ Movie Crazy – DVB အစီအစဉ်မှာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေ အတွက် ပုံမှန်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပြည်တွင်းက ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ ထူးထူး ခြားခြား Action Comedy အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Stuber !
ဒီကားကိုတော့ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ 20th Century Fox က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ကနေဒါရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ Michael Dowse က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Stu ဟာ Uber အငှားယာဉ်မောင်းတဦးဖြစ်ပြီး တနေ့မှာတော့ သူ့ကားကို ငှားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ လူတယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလူကတော့ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲဌာန က စုံထောက်ရဲအရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့ Vic Manning ဖြစ်ပါတယ်။ Vic ဟာ ရာဇ၀တ်မှုတခု နောက်ကို လိုက်နေချိန်မှာ အဲဒီအဖြစ်ထဲ Uber အငှားယာဉ်မောင်း Stu က ဘုမသိဘမ သိနဲ့ ပါဝင်လာခဲ့ချိန်မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ Uber အငှားယာဉ်မောင်းတဦး အနေ နဲ့ ငှားစီးတဲ့ ဧည့်သည်အပေါ် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးရင်း အန္တရာယ်တွေကြားမှာ ရှောင်ရင်းတိမ်းရင်းနဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြတ်သန်းရတာတွေကို အက်ရှင်နဲ့ ဟာသဇာတ် လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာကို ပရိသတ်တွေက ဒီကားထဲမှာ ရှုစားကြ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ပါကစ္စတန်-အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Kumail Nanjiani ၊ အမေရိကန်သရုပ်ဆောင်မင်းသား Dave Bautista တို့က ခေါင်းဆောင်ပါ ၀င်ထားကြပြီး တခြားဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Iko Uwais ၊ Natalie Morales နဲ့ Betty Gilpin တို့ကလည်း ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အက်ရှင် အပစ်အခတ်တိုက်ခိုက်မှု ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ် အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က နာမည် ကြီး ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တခုဖြစ်တဲ့ South By Southwest ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ကနဦးပြသခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ချီးကျူးမှုတွေလည်း ရရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။
IMDb မှာ Rating 5.8 ရရှိထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ Youtube ပေါ်မှာ တော့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၈ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၁၀၅ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာ ကောင်းတဲ့ Disaster Horror အမျိုးအစား ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ Crawl !
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Paramount Pictures က တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ပြင်သစ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Alexandre Aja က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ထဲက မြို့ငယ်လေးတမြို့မှာ ပြင်အားအ ဆင့် Category5ရှိတဲ့ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ချိန်မှာ အိမ်တွေထဲက နေ ဘေးလွတ်တဲ့နေရာတွေကို ထွက်ခွာကြဖို့ သက်ဆိုင်ရာက သတိပေးချက်တွေ ထုတ် ပြန်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ Haley Keller ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးက အိမ်ထဲမှာ ပိတ်မိ နေတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ Dave ကို ကယ်တင်ဖို့ ထွက်မသွားနိုင်ပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပဲ မိကျောင်းကြီးတွေဟာ အိမ်ထဲကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်အောင် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ချိန်မှာ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ကယ်ဆယ်မယ့်သူ မ ရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ သူတို့သားအဖကရော လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာတွေကို ဒီ ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရင်တ ထိတ်ထိတ်နဲ့ ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဗြိတိန် သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး Kaya Scodelario နဲ့ ကနေဒါ သရုပ်ဆောင်မင်းသား Barry Pepper တို့က အတွဲညီညီနဲ့ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ သွေးပျက်ထိတ်လန့်စရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြကွင်းပြ ကွက်တွေ၊ ပြောစကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော်တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြု ချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ ဘတ်ဂျတ် အမေ၇ိကန် ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းအကုန်အကျခံ ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုံမတင်ခင်ကတည်းက နာမည်ကြီးနေခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ Youtube ပေါ်မှာတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂၂ သန်းကျော် ရှိနေ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် ၈၇ မိနစ်ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ မြန်မာအချစ်အလွမ်းဒရာ မာ အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီမိုး !
ဒီကားကိုတော့ 7th Sense ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး မိုးနီလွင်ရဲ့ ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်ညွှန်းကို ဒါရိုက်တာ ၀င်းလွင်ထက်က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေး ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကတော့ စာဖတ်ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပိုင်ရှင် ကောင်မလေးတ ယောက်နဲ့ သူနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကောင်လေး ၃ ယောက်အကြောင်းကို ၄ ပွင့် ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းတပုဒ်အနေနဲ့ ပုံဖော်ဖန်တီးထားခဲ့တာပါ။
အညို၊ ဒီလှိုင်း၊ မိုးတိမ်ညိုနဲ့ မိုးနှောင်းစတဲ့ လူငယ်ဇာတ်ကောင် ၄ ယောက်ကြား မှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်လို အချစ်အလွမ်းဒရာမာ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ပုံ ဖော်ရိုက်ကူးထားမလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက မကြာခင်မှာ ရှုစားကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ သရုပ်မဆောင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသား ရဲတိုက်၊ ဒေါင်း၊ ရွှေ ထူး သရုပ်ဆောင် မင်းသား ၃ ယောက်နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး ၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့ က အတွဲညီညီနဲ့ ထူးထူးခြားခြား သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ Junction City ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝေကြီးသီဆိုထားတဲ့ ဒဏ္ဍာရီမိုး ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်တေးဟာလည်း ပရိသတ် တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေခဲ့ပြီး ဒီကားရဲ့ Trailer ဟာ Youtube ပေါ်မှာတော့ ၀င် ရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၂ သန်းကျော်ရှိနေခဲ့တာပါ။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို ဒီတခါ မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကလည်း ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်အိမ်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်တဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင် Lying and Stealing !
Crime Drama အမျိုးအစား ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်တဲ့ ဒီကားကိုတော့ အမေရိ ကန် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ Vertical Entertainment က တင်ဆက် လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Matt Aselton က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲက အဓိကဇာတ်ကောင် Ivan ဟာ ထူးခြားတဲ့ ဖောက်ထွင်းဝိဇ္ဇာ သူခိုးတယောက်ပါ။ တခြားသူတွေနဲ့ မတူညီတာကတော့ သူဟာ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အနုပ ညာပစ္စည်းတွေကိုမှ ပညာသားပါပါ ခိုးယူနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပြီး အနုပညာအပေါ်မှာ လည်း ချစ်မြတ်နိုးစိတ်ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူဆီက အမွေဆက်ခံပြီး ခုလို ဖြစ်လာရတဲ့ Ivan ဟာ ဒီလောကထဲကနေ ရုန်းထွက်ချင်နေသူတယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ အကြွေးတွေနစ်နေတဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Elyse နဲ့ ဆုံမိကြချိန်မှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ။ ၂ ယောက်ပူးပေါင်းမိသွားပြီး ဘယ်လို တွေ ဆက်လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုတာတွေကို ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပရိသတ်တွေက ရှုစားကြရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ဟောလိဝုဒ် သရုပ်ဆောင် မင်းသားမင်းသမီး ၂ ဦးဖြစ်ကြတဲ့ Theo James နဲ့ Emily Ratajkowski တို့က အတွဲညီညီ ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေ၊ ပြကွင်းပြကွက်တွေ၊ ပြောစ ကား Dialog တွေက အသက် ၁၇ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ကြည့်ရှုဖို့ မသင့်တော် တာမို့ ဒီကားကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ မိဘအုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက် Guideline နဲ့မှ ကြည့်ရှုသင့်တဲ့ Restricted R အဆင့် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
IMDb မှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ Rating 7.7 အထိ ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Youtube ပေါ်မှာလည်း Trailer ကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ သန်းနဲ့ချီ ရှိနေခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြာမြင့်ချိန် မိနစ် ၁၀၀ ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက် နေ့မှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မူဗီခရေဇီတွေကို နောက်ဆုံး မိတ်ဆက်ပြောပြပေးချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကတော့ ပေါ့ ပေါ့ပါးပါး မြန်မာ အချစ်ဟာသ ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ့် ချာလီဘ !
ဒီကားကိုတော့ လပ်ကီးဆဲဗင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက တင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ တည်တံ့က ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ တချိန်က နာမည်ကြီး ဟာသစာရေးဆရာကြီး ကြူမွှေးရဲ့ ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ အသက်သွင်းပုံဖော်ဖန်တီးလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိခေတ်ကာလ နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဟာသဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးပုံ ဖော်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ မကြာခင်မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် ချာလီဘနေရာမှာတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသား မြင့် မြတ်က ပါဝင်ထားပြီး သူနဲ့အတူ တခြားသရုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရွှေမှုံရတီ၊ ရဲအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ၊ ခင်လှိုင်၊ ဂျိုကာစတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေလည်း အများ ကြီး ပါဝင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ အထူးပွဲပြသမှုကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၆ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ၊ သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လတ်တလောမှာတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကား Trailer ဟာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့ အကြိမ်ရေ ၅ သန်းနီးပါး ရှိနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားကိုတော့ လာမယ့် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ရုံတင်ပြသသွားမှာမို့ ပရိသတ် တွေအတွက် ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Movie Crazy-DVB အစီအစဉ်ကို အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညတိုင်း ၇.၄၅ နာရီ၊ ၁၀.၄၅ နာရီတွေမှာ DVB TV channel ကနေ ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး မ ကြည့်ရှုလိုက်ရသူတွေအတွက် ကြာသပတေးနေ့မနက် ၉.၁၅ နာရီ၊ နေ့လည် ၁၂.၄၅ နာရီ၊ ၃.၁၅ နာရီ၊ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၂.၄၅ နာရီ၊ စနေနေ့ မနက် ၁၁.၄၅ နာရီနဲ့ တ နင်္လာနေ့မနက် ၉.၄၅ နာရီတို့မှာ ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ Movie Crazy တွေအတွက် နိုင်ငံတကာနဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်ကား တွေ အကြောင်းကို ကောင်းနိုးရာရာ ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး Movie Crazy-DVB ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေတဆင့်လည်း Like, Share နဲ့ Comment တွေပေးပြီး တော့ အားပေးနိုင်ပါတယ်။
Tags: ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတို့အတွက် ဘယ်ရုံမှာ ဘာကားတွေပြနေသလဲ(ရုပ်သံ)
Previous story ပြည်နယ်တိုင်း ၅ ခုတွင် မိုးရွာသဖြင့် နေအိမ်၊ ကျောင်းနှင့် လမ်းတံတားများ ပျက်စီးဆုံးရှုံး
Next story တက္ကသိုလ်များလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း